Dictionnaire malgache et encyclopédie de Madagascar : /bins/ohabolana/aretina.mg.n
Proverbe Adidinao tsy namangy, fa ny aretiko afaka ihany. [Veyrières 1913 #1045, Cousins 1885, Houlder 1895]
Proverbe Ataony ho aretin’ inona, ka hoe : "Hohaniko ny sisan’ Ikaky". [Veyrières 1913 #1491, Cousins 1885 #302]
Aza atao ohatra ny aretin’ alika, ka vitan-delaka ihany. [Cousins 1885]
Aza tafandry manana aretina, tahaka ny didimaso tsara ondana. [Cousins 1885 #710]
Nahoana no tafandry manana aretina, ohatra ny didi-maso tsara ondana ? [Cousins 1885]
Proverbe Be no te-ho Rasalama, fa tsy avelan' ny aretina. [Veyrières 1913 #841, Rinara 1974 #878, Cousins 1885 #757, Houlder 1895]
Didimaso tsara ondana : matory manana aretina. [Cousins 1885 #848, Rajemisa 1985]
Proverbe Fanefitra tsy mahafaka aretina. [Veyrières 1913 #73, Cousins 1885 #924]
Ketraka ny henjana, fa mby eo an dohalika ny aretina, ka tsy afa-mandeha intsony. [Cousins 1885 #1257]
Kibo malain-kanan-dratsy : mandraky ny efa maty ka mbola atao mandroso aretina ihany. [Cousins 1885]
Proverbe Mafanafana, toy ny aretin’ andriana. [Veyrières 1913 #208, Rinara 1974 #1828, Cousins 1885 #1393]
Proverbe Manao ondry tsy harena, ka misorona ondry boka. [Houlder 1895 #82, Cousins 1885 #1553]
Misorona ny ondry tsy volony, ka mankaloza ny aretina. [Cousins 1885 #1839]
Proverbe Maty tsikelikely toy ny aretin-dRenivalala. [Veyrières 1913 #2811, Cousins 1885 #1669]
Milambam-bary, ohatra ny aretin’ Imamo, ka ny aisa tsy maty be kibo. [Cousins 1885]
Mitomany takon’ ny olona: aretin’ an-doha no hita. [Cousins 1885 #1876]
Proverbe Nataonao dia ho faty moa aho, no dia narianao tamin’ aretina ? [Cousins 1885 #2095]
Ny fahadalana ohatra ny aretin’ androbe : vory vahoaka vao manala baraka. [Cousins 1885]
Ny fahalainana ohatra ny aretin’ androbe : vory vahoaka vao manala baraka. [Cousins 1885]
Ny faty mpanazakazaka, ny aretina vadin-koditry ny olombelona. [Veyrières 1913 #28, Cousins 1885 #2223]
Raha maloiloin’ ny mamy, tsy dikidiky, fa aretina. [Veyrières 1913 #2821, Cousins 1885 #2681]
Sikidim-boka: ny tokin’ aina miziriziry, fa ny aretina no hanapaka ozatra. [Veyrières 1913 #134, Cousins 1885 #2890]
Proverbe Toy ny aretina ny alahelo : ao ny morainy, ao ny sarotiny. [Cousins 1885]
Proverbe Toy ny aretin’ omby ny teny: izay mirehodrehoka ihany no ifindrany. [Cousins 1885]
Tsy misy aretin-dratsy tahaka ny nendra, fa namoizako olo-malala. [Cousins 1885 #3508]
Proverbe Voin-tenanao tsy namangy, fa ny aretiko sitran-tsy miody. [Rinara 1974 #5010, Cousins 1885 #3721]